201 Tuubbooyinka Birta ee Birta ku Xidhan
201 Dhuxulada Birta ahama
201 Tuubbooyinka Weel-Weyn ee Birta ku Dahaaran
201 Tuubbooyinka Wareegyada Birta ee Dahaarka ah
201 Biraha aan Xabbadda lahayn ee loo yaqaan 'steel Welded Pippes'
201 Tuubbooyinka Fidsan ee Alxanka oo Jaran
304 Tuubbooyinka Birta ee Birta ku Xidhan
304 Dhuxulada Birta ahama
304 Tuubbooyinka Weel-Weyn ee Birta ku Dahaaran
304 Tuubbooyinka Wareegyada Birta ee Dahaarka ah
304 Biraha aan Xabbadda lahayn ee loo yaqaan 'steel Welded Pippes'
304 Tuubbooyinka Fidsan ee Alxanka oo Jaran
316Laydhka Nalalka Birta ee aan Jirin
316Layrarka Weyn ee Alwaaxyada Weel Weranyihiin
316Laydhka Xidhmada ee Layrarka aan Daran oo Bixin
316Laydhka Nalalka ah ee Birta Dhexda leh
Waraaqaha Birta ah iyo Taarikada Birta ah
Waraaqaha Qurxinta ahama iyo Saxanka
Tuubbooyinka Birta ee Birta ku Xidhan
Ballaca Weelka SS Dhuumaha Welded
SS Tuubooyin welded midab leh
SS Tuubbooyinka Welded ee SS
Dhuumaha SS Wareegsan
Dhuumaha Weld-ga ah ee SS
Tuubooyinka SS Square
Furfuran oval iyo tuubooyinka ssval
Tuubbo bir aan fiicnayn oo bir duuban
Taarikada birta ee birta
Tuubbooyinka dareeraha birta ee aan nadiif ahayn
Tuubbo bir ah oo bir bir ah oo leh qaabab qaybo kala duwan
Birta aan khafiifka ahayn ee tuubbooyinka midabeysan
Tuubbooyinka s-derbiyada qaro weyn leh oo dhexroor weyn leh
Xusullada birta ee aan cagaha lahayn
Foshan Jinsuiying Qalabka Birta Aan Xalka Ahayn,.Ltd
No.1、2、3、3A,Xannibinta 2, E Aagga,Suuqa Liyuan Birta Saadka,Wadada Fochen,Chencun,Degmada Shunde,Foshan,Guangdong,Shiinaha
Warshad:No. 89 Galbeedka Gaoming Avenue,Magaalada Mingcheng,Degmada Gaoming, FOSHAN, GUANGDONG, CADAADO
Tan iyo markii la aasaasay shirkadeena, Waxaan samaynay dadaallo si aan u soo saarno alaabada ay macaamiishaydu ku qanacsan yihiin. Shirkadeenu waxay ku raaxeysataa sumcad wanaagsan waxaana la siiyay shahaadooyin badan oo ay soo saareen guddiyada warshadaha ee awoodda leh sida TUV, LRQA，ASTHMA,ANIGA,iwm. Hadday suurta gal tahay, Waxaan rajeyneynaa inaad sidoo kale ka mid noqon karto macaamiisheena iskaashiga ganacsi ee muddada dheer nala leh.
Faahfaahin aasaasi ah:
Product name 316L Stainless Steel Rectangular Pipes For Construction
Goobta asal ahaan Guangdong, Shiinaha(Wadanka)
Shahaadada ISO TUV LRQA
Heerka AISI, ASTHMA, DAAR, GB
Kartida Bixinta 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes
Faahfaahinta Baakadaha Biibiile kasta waxaa lagu duuduubaa bac balaastik ah ama la qaabeeyey
Stainless Steel Material 316L
Dhererka 6m ama la diyaarshay
Dulqaadka dhumucda 0.4-0.5mm:± 0.02mm;0.6-0.9mm:± 0.03mm;1.05-1.9mm:± 0.05mm;2.4-2.9mm:± 0.08mm;3.4-4.0mm±0.1mm;4.5-5.5mm±0.15mm
Habka geedi socodka Code ayaa la sameeyay,lagu dhejiyay ilaalinta nitrogen,Xiinka,qaab otomaatig ah,safeeyey
Dhameystirka A:sanded B:400#-600# mirror C:hairline brushed D:TIN titanlum
E:HL caday & muraayad (laba nooc oo loo dhammaystirayo hal tuubo)
Waxyaabaha C Iyo Mn P S Cr Ni
201 ≤0.12 .70.75 9.5-12.5 .00.045 .00.03 13-16 0.8-1.5
304 .00.08 .70.75 .02.0 .00.045 .00.03 18-19 8-10
316L .00.08 .001.00 .02.0 .00.035 .00.03 10-14 16.0-18.5
Shirkadeena, Foshan Jinsuiying Qalabka Aan Birta Laheyn ee Birta Co., Ltd, waxaa la aasaasay bishii Janaayo,2014. Waa shirkad leh warshad u gaar ah isla markaana ku takhasustay soo saarista tuubbooyinka birta naxaasiga ah oo ay ku jiraan tuubbooyinka leydi, tuubooyin laba jibbaaran iyo tuubooyin wareega oo leh cabbirro kala duwan. Daboolaya aag ka mid ah 20 hektar, warshaddeenu waxay ku taal No.89, West Gaoming Avenue, Magaalada Mingcheng, Degmada Gaoming, Magaalada Foshan, Gobolka Guangdong. Bil kasta warshaddeena ayaa soo saari karta 5000 ku 6000 tan oo tuubooyin ah.
Waqtiga dirida: 20-25maalmo kadib helitaanka deebaajiga
Package: Bacaha Poly iyo bacaha la tolay
S: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
A: Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo ka sameysan tuubooyinka birta ah ee birta ah ee birta ah. Lagu aasaasay Foshan,Shiinaha gudaha 2004, warshadeenu waxay khibrad badan u leedahay soo saaristooda.
S: Miyaad i siisaa shaybaarro si aan u hubiyo tayada intaanan dalban?
A: Dabcan, laakiin waa inaad bixisaa xamuulka.
S: Waa maxay kala duwanaanta wax soo saarka warshaddaadu?
A: Waxaan ku takhasusay soo saarida tuubooyin bir ah oo birta ka sameysan oo aan laheyn,square pipes and rectangle pipes.
S: Sideen amar kuugu siiyaa?
A: Fadlan noo soo dir amarkaaga iibsiga ama weydiimaha gaarka ah e-mayl, Wechat, ama WhatsApp. Kadib qaansheegta proforma dib ayaa laguugu soo celin doonaa adiga oo raacaya shuruudahaaga. Waa tan macluumaadka loo baahan doono:
Macluumaadka soosaarka: Qeexitaanno ay kujiraan waxyaabo, dhexroor dibadda ah, dhumucdiis, dherer. Qaybaha aad u rabto faahfaahin kasta ama miisaanka dhuumaha aad rabto
Waqtiga dirida & shuruud xirxirida;
Macluumaadka rarka: magaca shirkadda, cinwaanka, lambarka taleefanka, dekedda loo socdo;
Ka jawaab gudaha 24 saacado:
Susan Xu: Qolka: +86-13690200006
Calaamadaha：316L stainless steel pipe manufacturer & supplier, 316Layrarka Weyn ee Alwaaxyada Weel Weranyihiin, Stainless steel square tube, Ahama Steel Tube, Tuubbooyinka Birta ee Birta ku Xidhan
Waxaan ku dadaalnaa inaan macaamiisha siino alaab tayo leh. Codsi macluumaad,Muunad & Quote,Nala soo xiriir!
Foshan Jinsuiying Qalabka Birta Aan Xalka Ahayn,.Ltd © 2020 XUQUUQDA XUQUUQDAADA